Home News Kheeyre oo Dacwo ka Gudbiyay Fahad yaasiin iyo Khilaafkooda oo sii Xoogeeystay
Kheeyre oo Dacwo ka Gudbiyay Fahad yaasiin iyo Khilaafkooda oo sii Xoogeeystay
Waxaa la ogsoon yahay in khilaaf xoogan oo soo jiitamaayay mudo dheer uu ka dhex aloolsan yahay R/wasaaraha Xukumadda Soomaaliya Xassan Cali Kheeyre iyo Agaasimaha Maxtooyadda Soomaaliya Fahad yaasiin Xaaji Daahir kaasi oo salka ku haaya Rabitaanka Shaqsiyadeed oo la isku Fahmi wayay.
Xog hoose oo aynu helnay ayaa waxaa ay Sheegeeysaa in Labadooda Khilaafka ka dhexeeya la isku dayay in si hoose loo xaliyo hase’yeeshee lagu guul dareeystay.
R/wasaare Xassan Cali Kheeyre oo cabsi weeyn ka qaba in Fahad yaasiin Mooshin ka Abaabulo ayaa waxaa uu Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo u Gudbiyay Dacwo ka dhan ah Fahad yaasiin.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaana La Ogeeyn Go’aanka uu qaaadan doono ee la xariira labada Dhinac dhanka uu xigsanaayo Maadaama midba midka kale uu rabo in uu meesha ka saaro,waxaana Wararkii ugu Dambeeyay ay sheegayaan in Madaxweynahu Labadoodaba u yeeray islamarkaana uu kala hadlay xaaladaan.
Dhawaan ayaan idiinsoo Gudbi doonaa,Kullanka Sedaxda Masuul waxyaabaha looga hadlay iyo Go’aanka Farmaajo uu qaatay
Previous articleBeesha Abgaal oo Go’aan ka Qaadatay Dowlada Farmaajo ka dib Heshiiskii Itoobiya
Next articleQaabka loo soo dhaweeyay Abiy Axmed iyo Heshiisyada la galay oo Niyad Jab ku Riday Kumanaan Muwaadin (VIDEO)
Digniin loo jeediyay Musharaxiinta Maamulka Puntland
Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo cadeeyay in xukuumada ay faragelin ku...